JDS Scholar — WaiHin Hein Thant, Myanmar
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း(၄)
ဒီအပိုင်းမှာတော့ ကျနော် ဂျပန်အစိုးရက ပေးတဲ့ JDS Scholar ကိုလျှောက်တာမှာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို ဗဟုသုတရအောင် ရေးပြချင်ပါတယ်… ဘယ်နိုင်ငံက scholar ကိုပဲ လျှောက်လျှောက်သူတို့တောင်းဆိုသမျှကို အမှန်ကန်ဆုံးနဲ့ အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်အောင် ဖြည့်ဆည်းပေးရတယ် ……. ဂျပန်မှာလျှောက်တော့လည်း အတော်လေး သတိထားရတယ် …… နှမ်းတစ်စေ့မှ အမှားမခံပါဘူး …..…
(၁) ပထမအဆင့်က paper screening အဲ့အဆင့်မှာတင် ပြုတ်သွားတဲ့သူတွေလည်း မနည်းပါဘူး…သူတို့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေဆိုတာလည်း အတော်လေး များတာပါ… အဲ့ဒါကို ပြည့်စုံအောင် လုပ်ရတာကိုက တော်တော်လေး မလွယ်ပါဘူး. … ကျောင်းက grading တွေယူပီးသားမရှိဘူးဆိုရင် အဲ့ဒါတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ကျောင်းကနေ အချိန်မှီရအောင် တောင်းရတာကိုက အတော်ပြဿနာရှိပါတယ်… ဒီလိုစကော်လာတွေ ဖြေမယ်ဆိုရင် ကျောင်းအမှတ်တွေကို ပေးရတာပဲမို့ ဖြေမယ့်ရည်မှန်းချက်ရှိမယ်ဆိုရင် ကြိုကြိုတင်တင်တောင်းယူ ထားတာက အများကြီးအသက်ရှုချောင်မှာပါ…
(၂) ဒုတိယအဆင့်ကတော့ သူတို့က ကျင်းပပေးတဲ့ TOEFL ကို‌ဖြေရတာပါ .....… နှစ်ကြိမ်ဖြေရပါတယ်… ပထမအကြိမ်ရဲ့ အမှတ်စာရင်းတွေကို သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးဌာနက အရာရှိတွေဆီကို ပြန်ပို့ပါတယ်… ဒုတိယအကြိမ်ဖြေတဲ့ TOEFL ရဲ့ အမှတ်စာရင်းကိုပဲ count လုပ်တယ်လို့ ပြောပါတယ် ......… ဆိုလိုတာက ပထမအကြိမ်‌ဖြေတာရဲ့ အမှတ်စာရင်းက ဘယ်လိုဖြစ်နေနေ ဒုတိယအကြိမ်‌ဖြေတာမှာ သူတို့လိုချင်တဲ့ ရမှတ်ထိရအောင် ‌ ဖြေနိုင်ရင် အောင်တယ်လို့ ‌ပြောပါတယ် .......... ဒီအဆင့်မှာလည်း တော်တော်များများ ပြုတ်ကျန်ခဲ့ပါတယ် .....….
(၃) တတိယအဆင့်က ကိုယ်လျှောက်တဲ့ ဘာသာရပ်ပေါ် မူတည်ပီး ပြန်ကြလာတဲ့ကျောင်းက professor ကိုယ်တိုင် အင်တာဗျူးလာထိုင်တယ် ......… ဘာသာရပ်အပေါ် ကိုယ့်ရဲ့ လေ့လာထားမှု၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ သွက်လက်ချက်ချာမှု ဒါတွေကို အဓိကကြည့်တယ်… အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကျွမ်းကျင်မှုလည်း ရှိသင့်‌ပါတယ် ... ကိုယ့်အပေါ် impression အတွက် အရေးကြီးပါတယ် ...….
(၄) စတုတ္ထမြောက်အဆင့်ကတော့ comprehensive interview ပါ …..... အရေးကြီးပါတယ် ......… မြန်မာဘက်က တာဝန်ရှိသူ ၂ ယောက်ရယ် ဂျပန်သံရုံးဘက်က ဂျပန်လူမျိုး ၂ ယောက်ရယ် စုစုပေါင်း ၄ ယောက် အင်တာဗျူးပါတယ် ......… general question တွေ psycho question လေးတွေကို အဓိကမေးပါတယ် .....… မေးခွန်းတိုင်းကို အချက်ကျကျနဲ့ သွက်သွက်လက်လက် ဖြေဆိုသင့်ပါတယ်…
(၅) ပဥ္ဇမ‌မြောက်အဆင့်ကတော့ ဆေးစစ်ရတာပါ .....… ဒါလည်း အရေးကြီးတာပါပဲ .....… အဆင့်တိုင်း အောင်ခဲ့ပီး ဆေးကျလို့ ပြန်ဖြုတ်ခံရတဲ့သူတွေလည်း ရှိလို့ပါ .....… ယေဘုယျအနေနဲ့ ပြန်‌ပြောရရင် တတိယ‌မြောက်အဆင့်မှာ သက်ဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ်တွေက ဆရာတွေ လာဗျူးတဲ့အခါ စိတ်အတည်ငြိမ်ဆုံး ဖြစ်နေဖို့လိုတယ် ....… သူတို့က ကိုယ်တင်ထားတဲ့ research proposal ကို အဓိကထားပီးမေးကြတာပဲများပါတယ်… အဲ့လိုမေးတဲ့အခါ ကိုယ်မသိတဲ့အကြောင်းအရာဆို မသိကြောင်း ရိုးရိုးသားသားပဲ ပြောပီး ပြန်လေ့လာပါ့မယ်လို့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်တဲ့ စကားမျိုးကို ပြန်ပြောတာကသာလျှင် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်…. ကိုယ်မသိတာကို ရမ်းရွှီးနေရင်ကိုယ်မသိပဲ ‌ပြောနေမှန်း သူတို့က အလွယ်တကူ သိနိုင်ပါတယ် .....…. ဒါဟာ ကိုယ့်အပေါ်ကို အထင်သေးစေဖို့ လုံလောက်တဲ့ အကြောင်းအချက်ပါပဲ ...... နောက်တပိုင်းမှာတော့ အင်မတန် အရေးကြီးလှတဲ့ research proposal အကြောင်းလေးလည်း တီးခေါက်မိသလောက် ကျနော်ရေးပါဦးမယ် …..... ဒီ scholar ရဲ့ အသက်ဟာ ပထမဆုံးအဆင့်မှာတင် တခါတည်းတွဲတင်လိုက်ရတဲ့ research proposal ပါပဲ….
In WaiHIn Hein Thant's Blog Tags Interview, Research Proposal, TOEFL, JDS Scholar, Japan, Letters from Japan
ဂျပန်ပြည်မှ ရေးတဲ့စာ အပိုင်း(၃)
ကျနော် ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျောင်းသွားတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အိပ်မက်မျိုး ငယ်ကတည်းက တခါမှ မရှိဘူးပါဘူး… နိုင်ငံခြားကျောင်းသွားတက်မယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မျိုးတော့ရှိပါတယ်….
အမေရိကား၊ အင်္ဂလန်၊ နယူးဇီလန်၊ သြစတြေးလျ စတဲ့နိုင်ငံတခုမှာတော့ ပညာသွားသင်ချင်ခဲ့ဖူးတယ်… အရင်ပို့စ် မှာ ကျနော် မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှာ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားတဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း စီမံခန့်ခွဲမှု မဟာဘွဲ့ (MBA) သင်တန်း 1st batch မှာ တက်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ရေးခဲ့ပါတယ်… အဲဒီမှာ ကျနော့်‌ကို ညီအစ်ကို အရင်းလိုချစ်တဲ့ ဆရာ ဒေါက်တာမောင်မောင်နဲ့ သိကျွမ်းခဲ့တယ်…ဆရာမောင်က မန္တလေးတိုင်း စက်မှုလုပ်ငန်းကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ အတွင်းရေးမှူးပါ…သူရဲ့ အသိပေးမှုနဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရက ပညာသင်ကြေးထောက်ပံ့ပေးတဲ့ JDS Scholar ကို သိခဲ့ပီး ကျနော့်‌ကို ဝင်ဖြေဖို့ အဓိကတွန်းအားပေးခဲ့သူပါ… JDS Scholar က အဓိကက အစိုးရဝန်ထမ်းတွေအတွက် ပေးတဲ့ စကော်လာပါ ....… စကော်လာပေးနေတာ ခုဆိုရင်တော့ ၁၅ နှစ်လောက်တောင်ရှိပေါ့ ...…. ဒီစကော်လာက နာမည်လည်းကြီးပါတယ်… အဆင့် ၅ ဆင့်လောက်ကို ဖြေရတယ် ….. private sector ကိုလည်း နှစ်တိုင်း စကော်လာ ပေးလေ့မရှိပါဘူး …. ရံဖန်ရံခါမှ ကြိုးကြားကြိုးကြားခေါ်တာပါ…ကိုယ်ဝင်ဖြေမယ့်နှစ်ကမှ private sector ကို ပြန်ခေါ်တာလို့ ပြောပါတယ် (၇ နှစ်ကြာပီးနောက်မှာတဲ့)…. အစကတော့ ကျနော် ဝင်မ‌ဖြေတော့ဘူးလို့ပါပဲ… ရန်ကုန်မှာချည်းပဲ ‌ဖြေရမှာ လုပ်ရမှာဆိုတော့ ကိုယ့်စီးပွားရေးလည်း မန္တလေးမှာရှိနေတော့ လုပ်မနေတော့ပါဘူးလို့ပဲ ..... ဒါပေမယ့် ဆရာမောင်က အဓိကပဲ သူက ဝင်ဖြေစေချင်တယ်… ကိုယ့် talent ကိုလည်း သူယုံတယ် …… ရမယ်လို့လည်း ယုံကြည်တယ် …… နောက်ထပ်လူတွေအတွက်လည်း လမ်းပွင့်စေချင်တယ်ဆိုပီး တိုက်တွန်းမှု ကြောင့်ပဲ တလေးတစား အလေးထားပီး ဖြေဖြစ်ခဲ့တာပါ…. ကိုယ့်အပေါ် လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲယုံကြည်မှုပေးခဲ့တဲ့ ဆရာမောင်ကို အမြဲပဲ ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်… ကျနော်က မန္တလေးတိုင်း စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်းကို ကိုယ်စားပြုပီး ရန်ကုန်မြို့ UMFCCI အောက်ကနေ ဝင်ဖြေခဲ့တာပါ (ညီနောင်အသင်းမို့)
အဲ့ဒီနှစ်က scholar ခေါ်တဲ့ subject က ၄ မျိုးပါ…
Master in Business Administration နဲ့
Information Technology ရယ်ပါ.
အဲ့ဒီရွေးချယ်ခွင့်ရှိတဲ့ ဘာသာရပ်လေးခုထဲက urban planning ကိုပဲ ရွေးချယ်ဖြေဆိုခဲ့တယ်…
ဘာလို့ဆိုတော့ MBA ကတော့ ထပ်မလိုချင်တော့ဘူး… ကိုယ်လိုအပ်တာတွေကို သင်ယူခဲ့ပီးပီ… ကျနော့်‌ရဲ့ ပထမဘွဲ့က B.E (electronic and communications) ပါ .… အဲ့ဒီဘွဲ့နဲ့လည်း စီးပွားဖြစ်လုပ်မစား ခဲ့ဘူးဖူးဆိုတော့ master ကို electrical engineering နဲ့လည်းသွားယူနေစရာ အကြောင်းမရှိလှဘူး ….… လက်ရှိစီးပွားရေးအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ အလုပ်ကလည်း IT နဲ့ နွှယ်တယ်လို့ ပြောလို့ရသော်ငြား နိုင်ငံခြားမှာ အဲ့ဘာသာရပ်ကို မာစတာတန်းတက် ပြန်အသုံးချရအောင် အာသီသ မရှိဘူး ….… အာ့နဲ့ မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကို ရွေးချယ်တာပါ.. ရည်ရွယ်ချက်က ကိုယ်ချစ်တဲ့မြို့ကို တဖက်တလမ်းက တတ်နိုင်သမျှ ပြန်အကျိုးပြုချင်တာပါပဲ ….… ကျနော် မန္တလေးမြို့ကို သိပ်ချစ်တာလေ ……
ဒီလိုနဲ့ပဲ ဘဝမှာတခါမှ မလေ့လာ မသင်ယူဖူးတဲ့ ကိုယ့်အတွက် challenging တွေများမယ့် ဒီ urban planning ဆိုတဲ့ ဘာသာရပ်ကိုပဲ ခေါင်းမာစွာနဲ့ ရွေးချယ်ခဲ့တယ်… အဲ့လိုရွေးချယ်မိတဲ့အတွက် နောက်လာမယ့် ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းတွေအားလုံးကို ပြတ်ပြတ်သားသား ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်ပဲ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ သံဓိဌာန်လည်း တပြိုင်နက်ချခဲ့တယ် ….… နောက်အပိုင်းမှာ JDS scholar ကိုရဖို့ ဖြေရတဲ့ အဆင့်ဆင့်ကို နားလည်မှတ်မိသေး သလောက် ပြန်ရေးပြပါ့မယ် ...…..
In WaiHIn Hein Thant's Blog Tags MBA, B.E., Master of Engineering, UMFCCI, JDS Scholar, Urban Planning, Japan, Letters from Japan